War deg deg ah: Maxkamada sare ee Kenya oo baabi’isay doorashadii Madaxweynaha dalkaas * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
War deg deg ah: Maxkamada sare ee Kenya oo baabi’isay doorashadii Madaxweynaha dalkaas
By A warsame	 On Sep 1, 2017
Maxkamadda ugu saraysa dalka Kenaya ayaa go’aamisay in lagu celiyo doorashadii dhawaan lagu soo gabogabeeyay Kenya ee guddiga doorashadu ay ku sheegeen in uu ku guulaystay madaxweynaha hadda talada haya ee Uhuru Kenyatta.
Maxkamadda ugu saraysa dalka ayaa sheegtay in guddiga doorashada ee Kenya uusan si hufan u qabanin hannaankii doorashada.
Sidaas dareedeedna guddiga doorashadu waxay waxba kama jiraan ku tilmaantay natiijadii ay dhawaan ku dhawaaqeen guddiga doorashada.
Afar ka mid ah lixdii garsoore ee dacwada qaadaysay ayaa go’aamiyay in aysan si hufan u dhicin doorashadii madaxweynenimadu sidaas daraadeedna waxay amartay in dib loogu noqdo.
Labo ka mid ah garsooreyaasha ayaa qaatay go’aan midkaas ka duwan, halka midkii todobaadna uu ka xannuunsanaa maalmihii u dambeeyay.
Maxkamaddu waxaa kale oo ay amartay in lixdan maalmood gudahood lagu qabto doorashada.
Taariikhda Kenya waa markii koobaad ee doorasho Madaxweyne ay maxkamadi dib u celiso, waxaana meelo ka mid ah dalkaas ka socda dabaaldegyo ay dhigayaan shacab taageerdan mucaaradka, illaa haddana dowlada Kenya kama hadlin arintan.
Raysal Wasaaraha Soomaaliya oo madaxweynayaasha dowlad…
Guddiga La dagaalanka Musuqmaasuqa oo digniin culus ka soo…
“Doorashada kuma dhici karto 60-kii maalmood ee lagu…
Dowladda Talyaaniga oo Soomaaliya u soo direysa ciidan si…